FBC - Moosaajii basaastuu
Finfinnee, Amajjii 2,2010(FBC) – Moosaajiin basaastuu “spyware” maalinni?
“Spyware” sooftiweera basaastuudha. Isin homaa osoo hin beekin isinitti ergamee odeeffannoo koompiyuutara keessanirra jiru hayyama keessaniin ala osoo isin quba hin qabaatin gara koompiyuutara biraatti dabarsuudha.
Wanti inni godhuu dandayu cimina “spyware” sanitu murteessa.
Fkf, kan iskiriina koompiyuutara keessanii akkuma jirutti waraabuun akkuma isin argitanitti nama biraatti kan dabarsus ni jira.
Gariin odeeffannoo HDD kompiyuutara keessanirra jiru akkuma jirutti suuta suutaan yeroo qunnamtii intarneetaa argate dabarsa.
Yoo qaamni biraa isinitti erge, osoo hin beekin koompiyuutara keessan seenee, waan isin koompiyuutara keessaniin hojjettan hunda hordofaa jira jechuudha.
“Spyware” ykn sooftiweerri basaastuun koompiyuutara qofaaf osoo hin ta’in OS mobaayilaa kan akka “Android” irrattis kan hojjatu bifa appilikeeshiniitiin ni jira.
Akkaataan “spyware” isinitti ergamu hubachuun barbaachisaadha.
Suuraa/viidiyoo nama dinqisiisu “photoshop” fayyadamuun fakkeessanii laaluuf astuqi faa jechuun “link” isinitti ergan.
Erga “link” isinitti ergsme tuqxanii boodas viidiyoo kana daawwachuuf “adobe flash player” si barbaachicha jedhee isinii fida.
Asirraa buufadhaa jedhee yeroo isin buufachuuf tuqxan inni “spyware” isinitti erge jechuudha.
Viidiyoon sunis kijiba; inni haajaa isaa bahate; “spyware” isinitti ergee koompiyuutara keessan saa’aa san booda waliin itti jirtan jechuudha.
Mallattoon ittiin beekuu dandeessan:
Odeeffannoo erguuf hojii dabalataa koompiyuutara irratti waan dabaluuf, kompiyuutara dadhabsiisa.
Waan isin hin goone kan “homepage” (duree ykn fuula jalqabaa yeroo “browser” bantan waan ofii barbaade kaaya; kan dura ture dhiisee (garuu mallattoo kana softiweera tolaa tokko tokko irratti yeroo buufattan arguutu mala waan sanirraa maallaqa argataniif jecha).
Koompiyuutara akka hin sochoone godha. Kunis hojii dabalataa waan hojjataa jiruuf qofa osoo hin taane, waan waraabuutti jiru saniif haala mijeessudhaafis ta’uu dandaya.
Yoo moobaayila ta’e, odeeffannoo erguuf “data” hedduu waan fixuuf, data mobaayilaa humnaa ol yoo deeme isa tahuutu mala.
Dura ofirraa tiksuu (filannoo irra gaarii)
Erga koompiyuutara keessan seenee booda “anti spyware” fayyadamtanii balleessuu (filannoo guutuun guutuutti amansiisaa ta’ee miti)
Erga seenee/shakkitee HDD koompiyuutara keessanii foormaat gochuun waan keessa jiru guutumaan guutuutti faayiloota keessan dabalatee haquun, qulqulleessitanii akka haarawaatti OS galfachuu (filannoo gaarii yoo faayiloota hedduu barbaachisaa keessaa hin qabaanne ta’e)
Oduuwwan Biroo « Maloota ‘Google’ irraa odeeffannoo ittiin barbaannu	Sirni baniinsa olompiika Kooriyaa Kibbaa uggurraa saaybaraaf saaxilameet ture »